Ku Biiri Ra'yigaaga Xuska Hidar 29. - Cakaara News
Ku Biiri Ra'yigaaga Xuska Hidar 29.
Ra'yiga:-Bahda Cakaaranews marka hore waan idin salaamaya waanan ku faraxsanahay Doorka aad nasiiseen iyo wararkiinaba,marka xigta waxaan dhiibanaya talo bixin ku saabsan xuska maalinta Qowmiyadaha oo maalmo yar ka dib lagu qaban doono magaalo- madaxda DDSI ee Jijiga. Xuska maalinta Qowmiyadaha,Shucuubta iyo Dadyoowga Itiyoobiya inuu qabsoomo waxaa noo hadhsan maalmo aad u yar.
Xukuumada DDSI iyadoo ay ka duuleyso taarikhda iyo ahmiyada uu u leeyahay qabsoomidan xusku Qowmiyadaha dalka oo dhan si gaar ahaaneydna shacabka degaanka Soomaalida ayaa ukuumada DDSI iyadoo shacabkeeda la kaashaneyso waxaa lagu soo hawlanaa diyaargaroow aad u sareeya oo hada maraya in gacmaha laga dhabaandhabto.
Marka waxaan rabaa inaan tala-bixin ka dhiibto maalmahan yar ee noo hadhsan arimaha culeeyska in la saaro ah iyo waxyaabaha nalooga baahanyahay. 1
. Diyaargaroowgii xuska si loo gabagabeeyo hawlahu si fiican ayeey u socdaan hasa yeeshe waxaa loo baahanyahay in lagu xisaabtamo wakhtiga oo wixii hada ka dib ah awooda la saara soo dhoweeynta iyo sidii loo maamuli lahaa martida .
* waxaana haboon:-
1.1 Guddiyada ama Xubnaha heerarka kala duwan ee loo diyaariyey iney maamulaan martida waa iney diyaargarow sameeyaan waana iney ogaadan hawlaha ay fulinayaan iyo waajibkooda.
1.2 Guddiyadu ama xubnuhu waa iney ogadaan goobaha jiifka ee martida loogu talagaley iyo tiradooda laguna wareejiyo Goobaha iyo Huga looga baahan yahay. 1.3 Gaadiidka loogu talagaley martida waa in la diyaariya laguna wareejiyo xubnihii maareyn lahaa loona kala saaro Heerarka Qaabilaada.
1.4 maalinta xuska ka sokow goobaha shirarka wada tashiga lagu qabanayo cid kasta mesha ay fadhiisaneyso waa in loo sii sameeya calaamad u gaar ah.
2.maxaa na looga baahanyahay ?
2.1 Dadaalka ay ku hawlantahay Dowladu cid kasta ama shakhsi kasta oo inaga mid ahi waa inuu Doorkiisa qaataa kuna garab istaagnaa Xukuumada oo aan gudanaa waajibka nagu aaddan. 2.2 Gaar ahaan shacabka magaalada Jijiga waxaa saaran xil aad weeyn marka soo dhoweeynta ilaa amba-baxa martida kaalinta looga baahanyahay waa iney gutaan sidoo kalana habmaamuuseed sharafeed ay shacabweynaha Magaalada Jigjiga yar iyo weyn ula Dhaqmaan Martida ixtiraamaana Dhaqamadooda maadaama aynu kala dhaqan duwannahay Qowmiyadaha qaar.
maalmahaa yar waa in la sameeya dulqaad loona hogaansamaa awaamiraha dowlada ka soo baxayo si daacdnimo ku jirtana loola shaqeeya dowlada iyo hay;adaha nabadgalyada lana sii xoojiyaa sida fiican ee shacabku isugu xilqaameen la shaqaynta hay'adaha nabadgalyada.
waa inaan noqonaa anagoo iskaashaneyno kuwo degaankeena iyo shacabkeena sumcad u soo hooya siina xoojiya magacii iyo maamuuskii lagu yaqiinay Qowmiyada Soomaalida Itoobiya.
2.3 martidaa noo imaaneyso waxeey naga mudanyihiin soo dhoweeyn kal gaceeyl ah ixtiraam iyo waji furan.cid kasto waa inaan u ixtiraamnaa dhaqankeeda.qeybaha ganaacsatada iyo meelaha cuntada martida idiin imaaneeyso soo dhoweeya qiimo caqli gal ahna Naga iibsada Maciimashadaha iyo Badeecadaha.
2.4 dhinaca nadaafada magaalada weli fari kama qodna.marka waa in la sameeya ka hor xuska maalin loogu magacdaro ololaha Nadaafada wadar ahaanteena ka wada qaybqaadano sida shacabka,shaqaalaha,ardeyda iwm . 2.5 qeybaha warbaahinada sida ESTV,ETV,fm jijiga,CakaaraNews iyo websitiyada degaanka waa iney gutaan shaqadooda.guddiyada u qaabilsan media waa inuu qorshahoodu noqdaa soo gudbinta arimaha ku saabsan maalinta xuska iyo wacyigelino ay sii sameeyaan.
** ugu danbeeyn inshaaAllah xuska maalinta Qowmiyadahu sidii loogu talagaley ayuu u dhici doonaa marka waxaa iga dardaaran ah martidu intey nala joogto cid kasta kaalinteeda ha gudato nidaamka iyo anshax iyo dulqaad aan yeelano martidu iyadoo faraxsan isbedeley aan wada sagootino. Waxaan ahay Saalax Xuseen Mullaax. mahadsanidiin